Mmeputakwa site cuttings | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mmeputakwa site cuttings
Na-akụ ma na-elekọta turquoise na windowsill gị
Mkpụrụ osisi bụ osisi nke na-adịkarị na evergreen, deciduous na semi-evergreen obere osisi na osisi nke Olive ezinụlọ. Ihe kachasị na Europe, Australia, North Africa na Asia. Ọtụtụ ụdị privet dị na Japan, China, Taiwan na Himalaya. Ị ma? Nhazi gụnyere ihe dị ka iri ise.
Balsam - ifuru ubi nke ubi, nke bu osisi okooko osisi, obo nke oma. Balsam nwere okpukpu kporo ogologo, nke na-eto ruo 50 cm, oval na-edepụta ruo 12 cm n'ogologo. Balsam dị mma maka ịmepụta mma na ndo nke ubi. Ị nwere ike itolite ifuru na ubi okooko osisi na saịtị, na n'ụlọ na windowsill.
Gịnị mere oke hisop ji baa uru?
Ebube Hyssop - osisi nke bara uru na aku na uba. Hyssop, ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ St. John wort, site na ezinụlọ nke yasnotkovyh, na-eto na Asia, Mediterranean, Caucasus, Crimea. Ọ hụrụ steppes na nkume nkume. Ogwu nke hyssop ebe a na-ewere ya dị ka ihe dị mkpa ma dị nsọ. Onye ụkọchukwu ọ bụla na onye shaman na-emeso osisi a ebere na nlekọta.
Esi eto osisi junipa
Juniper bụ osisi nke ezinụlọ Cypress. Ọ dị ka afọ 50 gara aga, na gburugburu ụwa, e nwere ihe dị ka ụdị 70 nke osisi a. Ụfọdụ ụdị osisi juniper ruru 15 mita n'ịdị elu. Ụdị osisi junipa na ụdị osisi jupụtara na nhazi ihe owuwu. Ka anyị gaa na ụdị osisi junipa dị iche iche.
Otu esi eto eto na ulo gi
Oleander bụ osisi na-adịgide adịgide nke ezinụlọ ndị kutrov. Ọ nwere okooko osisi mara mma nke agba dị iche iche na agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara akwụkwọ. E nwere ọtụtụ akụkọ ntụrụndụ ndị a jikọtara ya na onye nnọchiteanya a nke osisi, ihe ndị mmadụ na-eme na nkwenkwe ụgha. N'agbanyeghi oke ogwu nke shrub, na subtropics o ji mee ihe n'uzo ozo.
Japanese spirea - kacha mma iche, kụrụ ma na-elekọta
Ọtụtụ mgbe ị na-eleba anya n'àkwà obodo ahụ na-adọta obere osisi shrub na-acha odo odo na acha akwụkwọ ndụ. Nke a bụ Japanese. O weere ebe kwesịrị ekwesị na mma nke akwa ime obodo na ebe ndị dịpụrụ adịpụ n'ihi ọnụ ala ya, unpretentiousness na ichebe àgwà ndị a na-achọ mma site na mmiri ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Otu esi eto zamiokulkas, kụrụ na ilekọta "osisi ego"
Zamioculkas bụ osisi ifuru na-eto eto nke na-ewu ewu n'oge dị mkpirikpi. A na-akpọ ya, dịka nwanyị nwere oke, osisi ego, ma ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na nke ikpeazụ, a na-akpọkarị zamiokulkas osisi dollar. Ya mere, o doro anya na ọ na-achọkarị ụlọ ọrụ na ụlọ akụ. Ọnọdụ kachasị mma maka uto nke osisi Na ọhịa, osisi ahụ na-amalite nke ọma na ala akọrọ na n'okpuru anyanwụ dị ọkụ.
Ihe nzuzo nile nke ịzụlite achicha n'ụlọ
Ahiman bụ onye òtù Gesneriev. E nwere ihe dịka iri ise ụdị anụ ndị a n'ụwa. Ala nna Ahmenes - South na Central America, a maara ya kemgbe narị afọ nke 18. Isiokwu a ga-agwa gị banyere ihe nzuzo nile nke ịmalite ifuru na ụlọ. Ị ma? Ahimnon - onye ikwu violets.
Atụmatụ nke kere ma na-elekọta Rosemary, Atụmatụ ifuru growers hụrụ
Rosemary bụ mgbe niile, nke a maara nke ọma dị ka ose. Otú ọ dị, a na-eji Rosemary eme ihe ọ bụghị naanị na nri, o nwere ụfọdụ ihe na-agwọ ọrịa na mmanụ ndị dị mkpa nke perfumers na cosmetologists na-eji. Rosemary: Osisi ihe omuma ya, gini bu rosemary? Nke a bụ osisi shrub nke osisi nke nwere epupụta, ọkwá, dịka mkpa aran.
Kwesiri nlezianya na-elekọta ụlọ ndị nwere oghere
A na-eji Thunbergia akpọrọ ihe maka okooko osisi mara mma, nke nwere ike iche iche dị iche iche, nakwa maka ọdịdị ya. Enwere ike ịhapụ ya ka ọ daa n'ala, gwakọta ya n'ite mmiri ka ọ kwụo ome ndị mara mma, ma ọ bụ ka ọ kwadoro na nkwado. Otú ọ dị, maka oghere mepere emepe, ọ na-achọ ka a na-atụgharị ya kwa afọ. Ọnọdụ dị mma maka ịmalite ịmalite na-eto eto n'ụlọ. Ọ bụghị ezigbo osisi na-arụsi ọrụ ike n'ụlọ.
Mkpụrụ osisi na mkpụrụ dị iche iche nke magnolia
Magnolia bụ otu n'ime okooko osisi ndị mara mma, na-adọrọ mmasị mmadụ niile na ịma mma ya, variegation na ihe ọkụkụ pụrụ iche. Ndị na-akwado ihe eji eji achọ mma na-agbalịsi ike iji osisi ndị dị otú ahụ chọọ ya mma, ka ha na-eme ụzọ dị iche iche.
Nzuzo nke na-eto eto Iberis evergreen n'ubi gị
Iberis Evergreen bụ ahịhịa ndụ nke osisi cruciferous (kabeeji), ọnụ ọgụgụ ruru iri anọ. Aha nke abuo - Iberian, ose, stennik, razlelepestnik. N'ebe ozo o na-etolite n'ugwu ugwu nke Eshia, obodo Mediterranean, na Caucasus, na Crimea na ebe ruru Don. Ị ma? Iberis nwetara aha ya site na okwu Iberia - aha Grik oge ochie nke Spanish oge a, ebe a na-ekpuchi ugwu ndị dị na Iberia.
Clematis cuttings na mmiri na ụbịa
Clematis bụ osisi shrub na okooko osisi buru ibu mara mma. Osimiri na-aga n'ihu site na mmiri ruo mbubreyo mgbụsị akwụkwọ. Osisi dị oke ọnụ, ya mere ozi gbasara otu esi eme ka ọtụtụ clematis baa uru ga-aba uru maka ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. Ị ma? Clematis bụ osisi osisi nke ndị ezinụlọ Buttercup bụ ụlọ osisi.
Akuku na ilekọta chrysanthemum multiflora, ihe di iche iche nke na - eto osisi
Ụdị Floristics na ejiji na-eto eto taa dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ. Umu ohuru ohuru, nke meriri ahia onu ahia ma di ugbua n'ogo ndi mara ubi, bu chrysanthemum multiflora. N'ihi ọdịdị ya mara mma nke ọma, ifuru a na-enweta obi nke ọ bụghị nanị ndị na-esepụta florists, kamakwa ndị amateurs chọrọ icho mma ha.
Iwu maka ozuzu kampsis: Atụmatụ sitere n'aka ndị na-eto eto ifuru
Ọtụtụ florists nwere mmasị na ajụjụ ahụ, olee ụzọ mmeputakwa nke kampsis. Onye naanị maara mmepụta nwa, ndị ọzọ maara ụzọ dị iche iche nke na-eto eto na-eto eto sitere na Ome ma ọ bụ akụkụ nke usoro mgbọrọgwụ. Ka ị wee mara ma nwee ike iji ụzọ niile dịnụ nke mmepụta ifuru, anyị ejikọtala isiokwu a.
Kedu ka esi eto Venus flytrap n'ụlọ
N'okike, e nwere osisi ndị na-eri anụ. Venus flytrap ma ọ bụ dionea (Dionaea muscipula) - otu n'ime ha. Ihe omuma a nke ezin ul o ha nwere rosette nke 4-7 na-egbuke egbuke na akwukwo di iche iche na onu ogwu. Mgbe a metụrụ ya, akwukwo ọ bụla nwere ike ịdịchi dị ka shells oyster.
Ihe omimi nke uzo uzo uzo uhie (uhie)
Rowan - osisi na-enweghị atụ, ma e wezụga nke a na-achọ n'oge ọ bụla n'afọ. N'oge okpomọkụ, ọ bụ okooko osisi mara mma na-acha odo odo na-esi ísì ụtọ; na ụbịa - ịrịba shades nke nwa ehi: si na-acha ọkụ odo na-acha uhie uhie-acha uhie uhie; na oyi, ọmarịcha ụyọkọ ụyọkọ nke mkpụrụ osisi bead.
Otu esi akụ osisi hydrangea n'ogige: akuku na ilekọta osisi
Hydrangeas na-ewu ewu n'etiti ndị na-akụ mkpụrụ osisi na ndị na-akụ ihe ọkụkụ gburugburu ụwa. Ịhụ hydrangea n'anya bụ maka: osisi ahụ anaghị adị mma, ọ na-agbapụkwa site na mmiri ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ulo ya di iche iche di iche iche di iche iche ma mara mma. Atụmatụ agba bụ ihe kachasị oke (ma ọ bụghị nke a, osisi ahụ nwere ike ịgbanwe agba ya na onyinyo ya n'otu oge).
Atụmatụ nke kụrụ na ilekọta peppermint n'ogige
Mint ihe ubi na-ezo aka na osisi na onye ọ bụla nụ banyere, n'agbanyeghị ma hà nwere ubi nke aka ha ma ọ bụ na ha. A na-eji ya eme ihe na nkà mmụta ọgwụ, jiri ya mee ihe dị ka ihe eji esi nri maka efere dịgasị iche iche, yana ọtụtụ mmanya na mmanya dị iche iche. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji mint na-eji mmanụ na-esi ísì ụtọ, ma onye ọ bụla dịkarịa ala, nwara mint gọọmentị.
Atụmatụ nke na-eto eto junipa China n'oge ezumike ha
Ọtụtụ n'ime anyị anụwo osisi junipa karịa otu ugboro, ma ọ bụghị onye ọ bụla maara ụdị osisi ọ bụ nakwa akụkụ ndị dị na ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ inye ụlọ okpomọkụ gị ihe omimi nke imepe anya, i nwere ike iji uru nke osisi junipa China. Ọdịda anyanwụ nke East na-adaba aha.
Ngo site na nkedo-ejikọ aka na aka aka gi: esi tuchie
Ụdị tomato dị iche iche nke Siberian "Japanese Crab" - nkọwa, àgwà, foto
Mkpa nke nhọrọ ma ọ bụ nke dị iche tomato na-kacha mma kụrụ?